အတွက်ဝယ်ယူမှု Make အီကွေဒေါ တဲ့အပျော်အပါး -! ဤတိုင်းပြည်များတွင်ကုန်သွယ်ရေးယဉ်ကျေးမှုကျောရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတတ်နှင့်၎င်း၏သဘောတရားတွေထဲက - အမြဲအောင်ပွဲတစ်ခု bargain ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တိုင်းရင်းသား, ရောင်စုံ, ထူးခြားဆန်းပြားလက်မှုပညာ၏စျေးနှုန်းနှင့်ဒါအသေးစား။ အများစုမှာစျေးဆိုင်စနေနေ့မှတနင်္လာကနေပွင့်လင်းခြင်း, သေးငယ်တဲ့အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်များများမှာ - ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတစ်ပါတ်။ ရက်, နည်းပါးလာခရီးသွားဧည့်တွင်, ဒါကြောင့်စျေးကွက်စျေးနှုန်းကိုတနင်္ဂနွေမှာထက်သိသိသာသာနိမ့်သည်။
ဒါကြောင့်အဘယျအအီကွေဒေါထံမှယူဆောင်လာသလော ပြည်တွင်းစျေးကွက်လက်မှုပညာထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဆက်ကပ်။ မြောက်မျက်နှာတစ်နှစ်ခွဲနာရီ drive ကိုခုနှစ်တွင် ကွီ - ကတောင်အမေရိက၏အကြီးဆုံးစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်တယ် Otavalo ။ ဒီနေရာတွင်စနေနေ့မှာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဆောင်ခဲ့သောအင်ဒီးယန်းအပါအဝင်ဒေသခံသိမ်းသွားလေ၏၏ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ အရည်အသွေးအသိုးမွှေးစောင်, bedspreads, ကျောဇော, ponchos, scarves, အင်္ကျီ, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအရောင်များနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဒအတော်များများထုတ်ကုန်။ ဒီစျေးကွက်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဝတ်, အစားအစာနှင့်အမှတ်တရပစ္စည်းများတစ်ခုဌန်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ Sakusili စျေးကွက်အမှုဆောင်နေသည်။ သားရေကုန်ပစ္စည်းများ Cotacachi ဈေးကွက်မှာကြည့်ကြဘို့, ရောင်းသူနှင့် ပတ်သက်. 15% ၏တစ်ဦးလျှော့စျေးပေးနိုင်ပါသည်။ ယင်း၏ထူးခြားတဲ့သစ်သားပန်းပုကျော်ကြား San Antonio တွင်က de Ibarra များ၏ဈေးကွက်။ သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းများအထက်တွင် $ 100 နဲ့ထံမှအထိ။ အီကွေဒေါနိုင်ငံအတွက်ကြီးစွာသောကောက်ရိုးဦးထုပ်လုပ်နေတာ။ ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံနဲ့အရောင်အံ့သြဖွယ်ဦးထုပ်, စတိုင်များကိုအောင်မြင်စွာပြည်ပမှာတင်ပို့နေကြသည်။ အကောင်းဆုံးဦးထုပ် Montecristi များ၏ရွာများတွင်အောင်, သင်အတွက်ဈေးကွက်မှာသူတို့ကိုမဝယ်နိုင် ကွင်ကာမြို့ ။ သှေးဆောငျစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်အရသာရှိတဲ့, အီကွေဒေါ ချောကလက်ချစ်သူများကမ်းလှမ်း: (ကမှာအသုံးပြုတဲ့ကိုကိုးပဲ, ဘယ်လဂျီယံချောကလက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း) ကအုပ်ကြွပ်လုပျဖို့ချောကလက်ရဖို့သေချာပါစေ။
ပင်လေယာဉ်ခရီးစဉ်မတိုင်မီသာနာရီအနည်းငယ်လျှင်, ဘာမျှမဝယ် - မစိုးရိမ်ပါ, အဘယျသို့အီကွေဒေါ, ကွီထံမှရောက်စေဖို့လုံးဝအရာအားလုံးပေးထားပါတယ်။ အမှတ်တရပစ္စည်းများပင်ထူးခြားဆန်းပြားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် မှလွဲ. မြို့ပြစျေးကွက်များတွင်အရွက်နှင့်အစေ့များကိုဆေးဖက်ဝင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ mercado - ရှေးအကျဆုံးမြို့တော်စျေးကွက်တစ်ခုမှာ။ သငျသညျ, အခြို့ဈေးဝယ်ပြုပါအစာစားရှိသည်နှင့်လေယာဉ်ကိုစောင့်ဆိုင်းအတွက်အချိန်ဖြုန်းနိုင်မည့်ကွီနှင့်ကုန်တိုက်ကြီးတွေအတွက်ရှိပါသည်။
အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်များ, ကဖေးနှင့်စားသောက်ဆိုင်တွေအများကြီးနှင့်အတူသစ်တစ်ခုခေတ်သစ်စျေးဝယ်စင်တာ - ဒါဟာ Quicentro စျေးဝယ်အနားမှာရှောက်သွားဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဧည့်သည်တွေအများကြီးခန့် 930.000 တစ်ရက်ရှိပါသည်။
ဘိုလီးဗီးယားအတွက် Tours မှ
Lumbago - လက္ခဏာများ
Beige သရင်ခွင် - အရှိဆုံးဖက်ရှင်မော်ဒယ်
အဆိုပါ beets ရိတ်ဖို့ဘယ်အချိန်မှာ?
Cyanocobalamin (ဗီတာမင် B12)
သားအိမ် fibroids ၏လက္ခဏာများ
အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် contraindications - ထင်းရူးတစ်မျိုးကတော့ကနေဖန်ဆင်းတော်ယို
အင်ပျဉ် - အကြောင်းရင်းများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် thrush ၏ကုသမှု - 1 သက်တမ်း